Koox hubeysan oo dad ku leysay suuq ku yaalla magaalada labaad ee ugu weyn Pakistan - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Koox hubeysan oo dad ku leysay suuq ku yaalla magaalada labaad ee...
Koox hubeysan oo dad ku leysay suuq ku yaalla magaalada labaad ee ugu weyn Pakistan
Inta la xaqiijiyay toddoba qofood ayaa ku geeriyootay tiro kale oo intaas ka badana waa ay ku dhaawacmeen, kadib markii koox hubeysan ay weerar ku qaadeen suuq lacagaha lagu sarifo oo ku yaalla magaalada Karachi ee dalka Pakistan.
Wararku waxay sheegayaan in koox ka kooban afar qofood ay gudaha u galeen dhismaha suuqa kadibna ay bilaabeen inay dadka toogtaan si kala sooc la’aan ah.
Qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday weerarka maanta ka dhacay suuqa ku yaalla magaalada Karachi ayaa warbaahinta u sheegay inay arkeen kooxda wax weerartay oo bambaanooyin ku tuuraya qolal ay dadku isku soo xireen markii ay rasaastu bilaabatay.
Mar dambe ciidamada ammaanka oo goobta tegay ayaa toogtay kooxdii weerarka qaaday, sida boolisku sheegay.
Sargaal ka tirsan booliska Pakistan oo la yiraahdo Sharjiil Kharal ayaa u sheegay warbaahinta dhawr saacadood, kadib soo afjareen weerarkaas oo ay dileen dhamaan kooxdii suuqa weerartay.
Dhaawacyada 10 qofood oo kale ayaa xarumaha caafimaadka la geeyay.
Koox hubeysan oo la yiraahdo jabhadda xoreynta Bolokh ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarkaan.
Previous articleAskarigii sababay dibadbaxyadii gilgilay Muqdisho oo maxkamad lasoo taagay
Next articleInternational partners are endorsing illegal term extension?